Manchester City oo ku guuleysatay sanadkii labaad oo xiriir ah tartanka EFL Cup + SAWIRO – Gool FM
Manchester City oo ku guuleysatay sanadkii labaad oo xiriir ah tartanka EFL Cup + SAWIRO
Bashiir February 24, 2019
(England ) 24 Feb 2019 kooxaha Manchester City ayaa ku guuleysatay markii labaad ee xiriir ah tartanka EFL Cup, kadib markii ay kaga qaaday Chelsea rigoorooyin 3 – 4
Kulanka ayaa ahaa mid aad u xiiso badan, kooxda Chelsea ayaana diiradda saaraneysay in ay ka aar gudato kooxda Man City oo aay kala kulantaya xasuuq weyn todabaadkii hore kulan ka tirsan horyaalka premier league.
Waxaa la baastay qeebtii koowaad ee ciyaarta wax ayna aheyd mid xiiso gooni leh wadata ciyaartoyda labada dhinac ayaana taxadar gooni leh sameenayey intii lagu guda jiray qeebtii koowaad ee ciyaarta .
Labada koox ayaa soo bandhigay qaab ciyaareed isku dheeli tiran marka laga eego isku dhiib dhiibka kubada iyo isku dayida goosha.
Qeebtii koowaad ee ciayaarta ayaa la is mari wayey , ciyaartoyda labada kooxd ayaana u huleelay qolka dhar badalashada si ay u soo qaatan nasiino iyo talooyin wax ku ool ah oo ku aadan kulanka .
Waxaa dib loo anba qaaday qeebtii dambe ee ciyaarta oo markan ka xiiso badnaan qeebtii hore madaama qeebtan ay koox go’aamin doonto in ay sandkan loo diwaan gilin doono hanashada tartankan.
Bules ayaa dar dar xoogan ku soo gashay qeebtii dambe ee ciyaarta waxana u suura gashay in ay dhow jeer garaan shabaqa kooxda Man City balse waa ay ku hungoobeen in ay gool u badalaan fursadahaas ay heleen .
waxa gaba gabaoobay waqtiga rasmiga ah ee ciyaarta , garsoorka ayaana afar daqiiqo o dheeri ah ku daray ciyaarta , Bules ayaana daqiiqadahaas guduhood heshay labo fursadood balse kama aysan faa’ideysan jaanisyadaas ciayarata ayaana ku dhamaatay 0-0 , waxaana loo baahday in lagu daro ciyaarta 30-daqiiqo oo dheeri ah .
qeebtii koowaad ee waqtigii dheeriga ee ciyaarta Bules ayaa markale ka kubad wanaagsaneed dhigeeda Man City balse ciyaarta sideedii iskama badalin , waxaa dib loo baastay qeebtii dambe ee waqtiga dheeriga ee ciyaarta la isku mari waayey gabi ahaanba , waxaana ugu dambeentii loo jiheestay in lagu kala baxo rigoorayaal.
ugu dambeen rigoorooyinkii la tuurtay waxaa guul gaaray kooxda Man city oo hanatay markeedii labaad oo xiriir ah tartanka EFL Cup .
Shaxda rasmiga ah kulanka kooxaha Levante Vs Real Madrid
Maxaa kala qabsaday Sarri iyo Kepa, kadib markii uu goolhaayaha reer Spain sameeyay amar diido?